အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈
Posted by kai on Aug 31, 2018 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 1 comment
ကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်လှစွာသော သမ္မတကြီးထရမ့် သမ္မတရာထူးမှပြုတ်တော့မည်လော..?
သမ္မတထရမ့်သည် သူ၏စိတ်တွင်ရှိသည့်အတိုင်း Twitter တွင်ရေးချတတ်သူဖြစ်၍ လူထုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာအရှိဆုံးသမ္မတတဦးဖြစ်သည်ဆိုရမည်။
သူစိတ်တိုင်းမကျသူကို မကျသည့်အတိုင်း ပြောတတ်ကာ သည်းညည်းမခံ၊ တန်ပြန်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းပြုတတ်သည်။
“ဒူးကိုလိုသော်ခေါင်းကိုမှန်း၍ ရင်၌ထိ၏” နည်းဗျူသာသည် သူရေးသားသောစာအုပ် The Art of the Deal အတိုင်း မူလအဓိကဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ထိုနည်းဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဟန်ရှိရာ ဒူးနေရာသို့ရည်ရွယ်ပါလျှင်
ဦးခေါင်းနေရာမှန်း၍ တိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေပြီး ရင်ဘတ်နေရာလောက် ဖမ်းချ,အလျှော့ပေးလိုက်လျှင် ထိုထိုသူတို့ဝမ်းသာအားရ ပြေး၍ချည်းကပ်ကြရသည်မဟုတ်ပါလား။
မြောက်ကိုရီးယားအကြီးအကဲ ကင်ဂျုံအွန်းအား ပါစင်နယ်အထိတိုက်ခိုက်ပြောဆိုကာ စစ်ကြီးဆင်နွှဲမယောင်ပြုပြီး ရုတ်တရက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရအောင်ဟုပြောကာ သူလိုချင်သည့်ဖက်ဆွဲယူသွားသည်က အဖြစ်တခုဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူကို အီရန်နှင့်လုပ်နေသော်ငြား ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Deal လုပ်နိုင်သည့် အကြာဆုံးမြို့ပြယဉ်ကျေးမှု ဘေဘီလုံဒေသသားများအား လိုရာတွန်း-ဆွဲခြင်းမပြုနိုင်သေး။
နိုင်ငံရေးသမားများ၊ သံသမန်များကဲ့သို ပြောချင်ရာများကို လှည်ပါတ်သွယ်ဝိုက်မနေ တဲ့ထိုးပြောချခြင်းမှာ ဘီလီယံဒေါ်လာကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများ၏ အကြီးအကဲ အရင်းရှင်ပီသစွာပင်ဖြစ်သည်။ လူနှင့်အရာအားလုံးသည် သူ့အမြင်တွင်သူ့လောက်သိနားမလည်သူများဖြစ်နေဟန်ရှိသည်။ ပြန်လှန်ဖေါ်ပြကာ တောင်းပန်ခြင်း မပြုတတ်သူလည်းဖြစ်သည်။
ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်အချို့နှင့်လည်း ပါတီတွင်းအကြိုသမ္မတရွေးချယ်ပွဲ ဒီဘိတ်များကထဲက အစေးမကပ် အယူအဆမတူဖြစ်ခဲ့သည့်အပြင် အမေရိကန်ဟီရိုး၊ စစ်ပြန် စိနိတ်၅ကြိမ်သက်တမ်းတောက်လျှောက်ထမ်းဆောင်နေသူ စိနိတ်တာမက်ကိန်းကိုပင် NotaWar Hero ဟုပြောခဲ့ဖူးသည်။ ယခု (ဩဂုတ် ၂၅)တွင် မက်ကိန်းကွယ်လွန်သောအခါ ကွယ်လွန်သူဆန္ဒအတိုင်း သမ္မတကို ဖိတ်ကြားခြင်းမပြုခဲ့၊ တကယ်တော့ သမ္မတဟောင်း ဘုရှ်(၄၁)၏ ကတော် ဘာဘရာဘုရှ် ကွယ်လွန်စဉ်(ဧပြီ ၁ရ ၂၀၁၈)ကလည်း ထရမ့်အားမဖိတ်ကြားပါရန် ကြိုတင်ပြောဆိုခံရဖူးသူဖြစ်သလို အင်္ဂလန်မင်းသားဟယ်ရီနှင့် အမေရိကန်ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးမာကဲလ်တို့၏ မင်္ဂလာပွဲ(မေ ၁၉ ၂၀၁၈)သို့လည်း ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရသူဖြစ်ပေသည်။
သူ၏ Approval rating မှာ ပျမ်းမျှ ၄၃.၂%ရှိသည်။ (သမ္မတနစ်ဆင် နှုတ်ထွက်စဉ်က ၂၄%) အမေရိကန်အများစုမဲနှင့်သမ္မတဖြစ်သည်မဟုတ်ပဲ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်နယ်တို့၏ အီလက်တိုရယ်ဗုတ်ဖြင့် သမ္မတဖြစ်လာသူဖြစ်၍ ပြိုင်ဖက်ဟီလာရီကလင်တန်ကို အမေရိကန်ဆန္ဒမဲ ၂.၈သန်းရှုံးခဲ့သူဖြစ်သည်။သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး(U.S. GDP Growth ၄.၁%)သာမက စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်မှာ တောက်လျှောက်တက်နေခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ တွင် ဒီမိုကရက်အဖြစ်မှ ရီပါ့ဗလစ်ကန်ပါတီကူးလာသော သူသည် ပြိုင်ဖက်များအားအနိုင်ယူကာ သမ္မတနှင့် ပါတီ၏အားအကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ်ကား ရပ်တည်နေပြီဖြစ်ပါ၏။
တကယ်တော့ ယခုအခြေအနေထိရောက်လာသည်မှာ ၂၀၁ရ ဇန်နဝါရီတွင် ODNI အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ရုံးမှ ၂၀၁၆ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ရုရှန်းတို့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုရှိသည်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်းမှစသည်။ ၂၀၁ရ မေလတွင် ဒုတိယရှေ့နေချုပ်၏ ညွှန်းဆိုခန့်အပ်မှုဖြင့်
အမှုခြေရာခံလိုက်နှိုက်ဖေါ်ထုတ်ရာတွင်နာမယ်ကြီးသူ ယခင်FBI ဒါရိုက်တာဟောင်း Robert Mueller က အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ကာ စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုဩဂုတ်လအထိ တရားစွဲဆိုထားခြင်း ၃၂ယောက်ရှိကာ ထိုအထဲတွင်အမေရိကန် ၅ယောက်သာပါ၍ ယခုအမေရိကန်များအားလုံး ရုရှန်းတို့၏၂၀၁၆ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ပြစ်မှုကြောင့် တိုက်ရိုက်တရားစွဲခံရသူများကားမဟုတ်။ ၂၀၁၆ ရုရှန်းတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲဝင်စွက်ဖက်မှုအား စစ်ဆေးနေသော အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးမှူးးRobert Mueller ၏ စုံစမ်းမှုများမှာ ရုရှားနှင့်သမ္မတရွေးပွဲကန်ပိန်းအဖွဲ့ တိုက်ရိုက်ငြိစွန်းသည် တခုမျှ တိတိကျကျထုတ်ဖေါ်မလာပဲ တိတ်ဆိတ်လွန်းနေကာ ယခုတရားစွဲအမှုတို့သည် “ညောင်မြစ်တူးရင်းပုတ်သင်ဥပေါ်”ကုန်သည့်သဘောဆိုက်နေပေသည်။
Winter is Coming -Game of Thrones ဇတ်လမ်းတွဲမှ အလုံစုံဖျက်စီးပျက်သုဉ်းနိုင်စေရာ White Walkersဖုတ်ကောင်များ ထကြွချီတက်လာကြရာကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု သမ္မတထရမ့်အတွက် ဤစကားဆောင်ပုဒ် သုံးကြလေပြီ။
ဩဂုတ်လ၏ နောက်ဆုံးပါတ်များသည် အမေရိကသမ္မတထရမ့်အတွက် အာဏာရ၂နှစ်ကာလအတွင်း အထိခိုက်ဆုံး နေ့ရက်များဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေရိက၏ လာမည့်နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင်မူ လှိုင်းပြာ Blue Wave များဖြစ်ကာတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးလာပါဦးမည်။
သို့နှင့် အဖြေတခုထုတ်နိုင်ပါရန် ယခုရက်ပိုင်းပေးထားသော အချက်အလက်များကို ချရေးကြည့်ပါမည်။
၁။ သူ၏ မူလလက်စွဲရှေ့နေ(ဟောင်း) Michael Cohen သည်သူနဲ့ ငြိစွန်းခဲ့သော အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို နှုတ်ပိတ်ခပေးခြင်းဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကာ ရာဇဝတ်မှုနှင့် တရားစွဲ အမိန့်ချခံထားရသည်။ အဆိုပါရှေ့နေသည်သူ့အမူသည်ဖြစ်သော ထရမ့်နှင့်ပြောစကားများကို အသံသွင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။
၂။ သူ၏သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကန်င်ပိန်း မဲဆွယ်ပွဲ အကြီးအကဲ Paul Manafort အခွန်ရှောင်ကိစ္စ၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ဖွင့်ကိစ္စတို့ဖြင့် ရာဇဝတ်မှုနဲ့ တရားစွဲ အမိန့်ချခံထားရသည်။
၃။ သူနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ David Pecker, CEO of National Enquirer publisher American Media Inc., နှင့် Trump Organization ဘဏ္ဍာရေးမှုးချုပ် CFO Allen Weisselberg, White House counsel Donald McGahn တို့ ဖေါ်ကောင်-ကင်းလွတ်ခွင့်ရထားသည်။
၄။ အရင်သမ္မတဟောင်းအိုဘားမား၏ ထောက်လှမ်းရေးဌာန(များ)မှအကြီးအကဲများကို နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုချက်( ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်များကို ဖတ်သိနားလည်ခွင့်)တို့ကို သမ္မတမှရုတ်သိမ်းထားသဖြင့် ထောက်လှမ်းရေးဌာန(များ) နှင့်ဆက်ဆံရေးအတင်းမာဆုံးအခြေအနေဆိုက်နေသည်။
၅။ သူ၏ရှေ့နေချုပ် Jeff Sessions နှင့် Twitter ပေါ်တက်၍ စကားအခြေအတင်ဖြစ်နေကာ အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ရန်အထိပင်ကြံစည်နေကြောင်း စကားထွက်လာနေသည်။
၆။ အခြေခံဥပဒေအရ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်အာဏာရှိသော အမေရိကား၏ Mainstream media (MSM) များနှင့် ( Fox News မှလွဲ၍) ထိပ်တိုက်ဆိုင်နေသည်။ လွတ်လပ်သည့်မီဒီယာများခမြာ သမ္မတထရမ့်လက်ထက်တွင် FAKE NEWS သာမက “အမေရိကန်တို့၏ရန်သူ”ဟုပင်ပြောဆိုခံရသည့်အခြေအနေရှိသည်။
“The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People! — “President Trump
ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှကြိုတင်လမ်းကြောင်းပေးလိုက်သည့်တရားရေးလမ်းညွှန်မှုအရ အိမ်ဖြူတော်တွင်ထိုင်ကာ တိုင်းပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောသမ္မတအား ရာဇဝတ်ကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုအရေးယူခွင့်မရှိပါ။
တရားစွဲအရေးယူပါလျှင်လည်း အမှုရှုံးပါလေဦး သမ္မတ၌ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အကြွင်းမဲ့အာဏာရှိပါသည်။
ထိုအာဏာဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပြန် ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အခြေခံဥပဒေအရသတ်မှတ်ချက်အရမှာမူ ကွန်ဂရက်အမတ်များမှ ၅၁%မဲဖြင့်အယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းကာ တရားစွဲအမှု Trial စတင်ခွင့်ရ၍ စိနိတ်တွင် တရားသူကြီးချုပ်ရှေ့မှောက်၌ သမ္မတ၏ရှေ့နေနှင့်အမှုဆိုင်ရပါသည်။ ထို့နောက် ၃ပုံ၂ပုံသောစိနိတ်တာများ (၆၇%)ကမဲပေးဆုံးဖြတ်၍ Impeachment ဖြင့်သာ ဖြုတ်ချပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပါသည်။
ယခု ကွန်ဂရက် ( Republican (237) – Democratic (193) )သည် ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်(ထရမ့်နှင့်ပါတီတူ) အများစုဖြစ်နေပေရာ.. Impeachment တင်ခြင်းမှာ အောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်..
ကွန်ဂရက်မှ Impeachment အဆိုကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါမှ စိနိတ် (Republican (50)- Democratic (47) – Independents (2) – Vacant (1))၏ ၃ပုံ၂ပုံ မဲဖြင့် ဆုံးဖြတ်ဦးမည်ဖြစ်ပေရာ ယခုစိနိတ်သည် ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်အများစု (၅ဝခုံ)ဖြစ်၍ Impeachment အောင်မြင်မည်မဟုတ်..။
ထို့အပြင် တရားသူကြီးချုပ်များအဖွဲ့ Supreme Court ၉ယောက်တွင်လည်း.. ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ပါတီသမ္မတများမှ ခန့်အပ်ရန်အဆိုတင်ပေးထားသူ ၅ယောက်( တယောက်ပင်စင်ယူထား) ရှိနေပေသေးသည်။
လောလောဆယ် ပေးထားချက်များအရ နိဂုံးချုပ်သော်..
မဲဆန္ဒရှင်အမေရိကန်အများစုကြီးမှ လာမည့်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်ကွန်ဂရက်အမတ်အများစုကို ကွန်ဂရက်နှင့်စိနိတ် ၂ရပ်လုံး၌ ထိုင်ခွင့်ရအောင် မဲပေးရွေးချယ်ပါမှ Impeachment သို့သွားရန်လမ်းပေါ်ရောက်မည့်သဘောရှိသည်။
အကြိုမဲဆန္ဒများနှင့်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအရ Blue Wave ခေါ်သော ဒီမိုကရက်တု့ိ၏ လှိုင်းပြာကြီးလာနေဟန်ရှိပါသည်။ သို့ငြား စိနိတ်တွင် ခုံနေရာ၃ပုံ၂ပုံရရန်မူမဖြစ်နိုင်သလောက်အခြေအနေ။
ယခုအခြေအနေအရ ကန်ပိန်းငွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှု ရာဇဝတ်မှုသာလျှင်ရှိနေ၍ သမ္မတထရမ့် ထွက်ရပါလျှင်လည်း.. ဒုတိယသမ္မတ မိုက်ပန်င်စ့်မှ ချက်ချင်းသမ္မတဖြစ်ပါမည်။
ရုရှန်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်၍ သမ္မတရာထူးနေရာကို ယူသည်ဟု နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်အဖြစ်အယုံအကြည်မရှိအဆိုတင်ခံရလျှင်ကား ဒုတိယသမ္မတလည်းသမ္မတနှင့်အတူထွက်ရမည်ဖြစ်ကာ ရီပါ့ဗလစ်ကန်င်ပါတီမှ House Speaker Paul Ryan သမ္မတဖြစ်ပါမည်။ တကယ်တော့ Paul Ryanသည် နောင်သက်တမ်းဝင်မပြိုင်တော့ဟု အဆိုပြုတင်ထားသူဖြစ်ကာ လာမည့်၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီတွင် အနားယူမည့်သူဖြစ်၏။
မည်သို့ဆိုစေ ပါတီတူ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြ၍ မူလထရမ့်ပေါ်လစီများ ရုတ်တရက်ထူး၍ပြောင်းသွားမည်ကား မဟုတ်။
သမ္မတသက်တမ်းပြည့် ၂၀၂ဝ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပသည်အထိ ဒီမိုကရက်တို့အုပ်စီးထားသော ကွန်ဂရက်-စိနိတ်ထိမ်းကြောင်းမှုတွင်းမှမှေး၍သွားပါလိမ့်မည်။
ထရမ့်သည် ဘီလီယံနာဖြစ်ကာ ငွေကြေးလိုအပ်သူကားမဟုတ်။ ထို့အတူ အသက်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်တန်းရောက်ပါမှ သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ရာ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးပြီး သမ္မတတာဝန်မှ စိတ်ပျက်နှုတ်ထွက်ခြင်းမျိုးလည်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ သမ္မတအဖြစ်မှနှုတ်ထွက်မပေးပဲ တင်းခံနေကာ မဲဆန္ဒရှင်အမေရိကန်များ၏ အုံကြွမှုဖြစ်အောင်လည်း ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ရှေ့နေချုပ် Jeff Sessions ကို အလုပ်မှထုတ်ပယ်၍ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကိုလည်း သူ့စိတ်ကြိုက်သူနှင့်အစားထိုးနိုင် /ဖျက်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
Impeachment လမ်းပေါ်ရောက်လျှင်လည်း အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်နေမှုများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် နှစ်ချီကြာတတ်သဖြင့် သမ္မတထရမ့်၏ပုံမှန်သက်တမ်း ၄နှစ်တွင် ၂နှစ်ကျန်နေသေး၍ သက်တမ်းပြည့် အုပ်ချုပ်သွားရဖို့အခြေအနေလည်းရှိပါကြောင်း။
အမေရိကနိုင်ငံရေးတွင် ယခုလိုအဖြစ်မျိုး(တို့) သည် ထူးပေသည့်ဆန်းရာသော်ကားမဟုတ်။ အမှန်တရားရှာဖွေနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ဤလိုအဖြစ် အဖမြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်နိုင်/ဖြစ်နိုင်မည်လားဟူသည့်မေးခွန်းကိုမူ သင်နှင့်သင့်မိတ်ဆွေအတွက်ထားခဲ့ပါမည်။